ओलीको आक्रोशः मिलिजुली खान स्वार्थको गठबन्धन
मङ्लबार, साउन २६, २०७८ ५:१५
नेपाल अन्लाईन पत्रिका – काठमाडौं। प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता केपी शर्मा ओलीले सत्ता गठबन्धनप्रति आक्रोश पोखेका छन्। प्रतिपक्षमा पुगेपछि पहिलोपटक मंगलबार संसदमा धारणा राख्दै ओलीले कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, जसपा, जनमोर्चा र एमालेकै माधव नेपाल पक्ष सम्मेलित गठबन्धनप्रति तीव्र घृणा व्यक्त गरेका हुन्। ***यो समाचारको भिडियो हेर्न तल क्लिक गर्नु ***
प्रधानमन्त्रीबाट पदमुक्त भएपछि असार २९ गते प्रधानमन्त्री निवासबाट बालुवाटारबाट बालकोट पुगेर ओलीले आफ्नै पार्टीका नेता माधव नेपाललाई ‘गद्दार र देशद्रोही’को आरोप लगाएका थिए।
मंगलबार संसदमा ओली प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डप्रति उही शैलीमा खनिए।
देउवा र दाहालसँगै ओलीले गठबन्धनले सार्वजनिक गरेको न्यूनतम साझा कार्यक्रमको धुँवादार विरोध गरे। ओलीले गठबन्धनलाई जनताको पक्षमा काम गर्न नभई मिलीजुली खान बनाइएको आरोप लगाए।
भूमि आयोग विघटनप्रति ओलीले विरोध जनाए। उक्त घटनाले कांग्रेस नेतृत्वको गठबन्धन जनताका समस्या समाधान गर्न नभई आआफ्ना स्वार्थ पूरा गर्न निर्माण भएको उनले जिकिर गरे। ओलीले विरोध गर्ने क्रममा गठबन्धनको संस्कृति नै लोकतन्त्र विरोधी मान्यताको भएको बताए।
ओलीले भने, ‘यो सरकार जनताको समस्या साधान गर्न होइन, मिलिजुली खान निर्माण भएको हो। यो लोकतान्त्रिक होइन, स्वार्थको गठबन्धन हो। गठबन्धनको संस्कृति लोकतान्त्रिक संस्कृति होइन। गठबन्धन विचारका आधारमा हुनुपर्छ। पाँच दलीय गठबन्धनले रे, एमाले गठबन्धनमा छैन।’
ओलीले न्यूनतम साझा कार्यक्रमलाई ‘भुलभलैया’ र ‘सडकमा बाँडिएको कागज’को संज्ञा दिए। एमसिसी पारित गर्ने, लिम्पियाधुरा, लिपुलेक भूभाग फिर्ता ल्याउने विषय नराखेको भन्दै ओलीले प्रश्न गरे।
‘साझा नीति कार्यक्रममा कांग्रेसको अनुहार छैन। प्रणाली सिफ्ट, केके सिफ्ट सिफ्ट? एमसिसीको बारेमा साझा कार्यक्रममा केही छैन। यही सरकार हुँदा एमसिसीमा गरेको हस्ताक्षर गरेको होइन? प्रधानमन्त्रीज्यू एमसिसी के गर्नुहुन्छ?, ओलीले देउवातर्फ आँखा तान्दै भने, ‘जनताले जान्न चाहेका छन्? तपाईंको साथमा १६५ जनाको जत्था छ। पास गर्नुहोस्।’
ओलीले लिम्पियाधुरा विवादलाई समस्याका रुपमा मात्रै चित्रित गरेकोमा असन्तुष्टि जनाए। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर र माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डप्रति आक्रामक रुपमा प्रस्तुत भएका ओलीले भने, ‘लिम्पियाधुरा फिर्ता गरेर ल्याउँछु भनेर किन भन्न नसकेको? त्यो हाम्रो अभिन्न भुभाग हो। समस्या समाधान गर्छु रे? यसलाई समस्यामा राख्ने?’
पूर्वप्रधानमन्त्री ओलीले इपिजी प्रतिवेदनबारे साझा कार्यक्रम मौन रहेकोप्रति पनि प्रश्न उठाए। ‘इपिजीबारे किन नबोलेको? जिब्रो चपाउँदा चपाउँदा रगत आइसक्यो होला? कति डराएको हो?’ उनले भने।
स्वास्थ्य सामग्री खरिद प्रक्रियामा भएको अनियमितताको छानबिन गर्ने साझा कार्यक्रमको बुँदामाथि पनि ओलीले आक्रोश पोखे। उनले आफूले भ्रष्टाचार छानबिन गर्ने कुराले खुशी लागेको बताउँदै अघिल्ला सरकारको पालामा भएका खरिदबारे पनि छानबिन गर्न सुझाए।
‘भ्रष्टाचारविरुद्धको छानबिन गर्ने? खुशी लाग्यो। साँच्चै पहिले देखिकै गरे हुन्छ। क्यान्टनमेण्टका बारेमा पक्कै पनि उठ्छ कि? ललिता निवास, मातातीर्थको जग्गा पनि गर्छ होला। वीर अस्पतालमा भएको भ्रष्टाचारबारे पनि छानबिन गर्नुहोस्,’ ओलीले भने।
उनले आफ्नो संसद विघटन गरी चुनावमा जाने घोषणालाई ‘प्रतिगमन’ भनेको बारे सख्त विरोध जनाए। २०६१ सालमा देउवाले संसद विघटन गरेर सत्ता तत्कालीन राजालाई बुझाएको स्मरण गरे। प्रतिनिधसभाको रोष्ट्रममा उभिएर ओलीले सर्वोच्च अदालतले भनेर मात्रै नहुने भन्दै देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न आदेश दिने सर्वोच्चको फैसलाप्रति पनि असहमति जनाए।
‘प्रतिगमन भनेको त २०६१ साल माघ १९ गते बुझाएकोलाई भनिन्छ। अदालतले भन्यो भन्दैमा हुन्छ? अदाललको फैसला मानिन्छ? तर सही छ भनेर भन्न सकिँदैन,’ ओलीले अगाडि भने, ‘अदालतको फैसला संविधानअनुसार छैन। यो सबै शब्दहरु राजनीतिक पूर्वाग्रहबाट राजनीतिक द्वन्द्वतिर लैजानका लागि होला। यो सरकार संवैधानिक, लोकतान्त्रिक भन्न सकिँदैन, आउने वित्तिकै यो सरकारले भूमिहीनमाथि बञ्चरो चलायो, यसले देखिँदैन यो सरकार कसको हो भन्ने? जाली मुद्दाबाट सरकार ल्याउने अनि अनि संघर्षबाट भन्ने?’
ओलीले आफूले एक करोड खोप ल्याएर थुपारिदिँदा पनि सरकारले लगाउन नसकेको आरोप लगाए। ‘एक करोड खोप ल्याइदेको छु, चैतसम्म भनेर फागुनमा हुने चुनाव नगर्न खोज्या हो?’ उनको प्रश्न थियो।
एमाले अध्यक्ष ओलीले संसदलाई एक महिनासम्म बिजनेश नदिएको विषयतर्फ पुन सरकारको ध्यानाकर्षण गराए। आफू सत्तामा हुँदा नागरिकता विधेयक अघि बढाउन तयार नभएका ओलीले मंगलबार भने समितिमा अड्काएर राखेको आरोप लगाए।
उनले भने, ‘नागरिकता विधेयक तीन वर्षसम्म समितिमा अड्काएर राखियो, एक महिनासम्म बिजनेश नदिएर सदनलाई किन राख्या? तुरुन्तै विधेयक पेश गर्नुहोस्। नागरिकता विधेयक पेश गर्नुहोस्।’
प्रचण्डको आगोमा पानी
ओलीले आगोसँग नखेल्न माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले दिएको चेतावनीप्रति कटाक्ष गरे। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले विश्वासको मत लिने प्रस्तावमाथिको छलफलमा क्रममा प्रचण्डले माओवादी आगो भएको उल्लेख गर्दै आगोसँग नखेल्न चेतावनी दिएका थिए।
त्यसको जवाफमा ओलीले भने, ‘सरकार फेरिने बित्तिकै भनियोः म आगो हुँ मसँग नखेल। उहाँले देशमा लगाएको डढेलो निभाएका हौँ। यस्ता आगो निभाउन पानी खन्याउनुपर्छ। सरकार बन्दैछ प्रतिपक्षलाई धम्की? प्रतिपक्षले गाली गरेर सरापेर, धम्क्याएर, नत्र……भनेर राष्ट्रिय सहमति? नत्र के गर्नुहुन्छ?’
ओलीले आफू नेतृत्वको सरकारले राजनीतिक समस्याको समाधान गरेको, हिंसाको बाटोमा गएकालाई मूलधारमा ल्याएको दाबी गरे।
काम नगरेकोमा देउवालाई बधाई
ओलीले एक महिनासम्म काम गर्न नसकेको भन्दै देउवा सरकारलाई बधाई दिए। एमाले नेतृत्वको सरकारले राजनीतिक स्थिरता र संवृद्धिको बाटामो हिँडिरहेको अवस्थामा आफूलाई हटाएकोमा आक्रोश व्यक्त गरे।
‘गठबन्धन सरकारलाई एक महिना केही नगरेकोमा बधाई। नेपाली जनतालाई संवृद्ध बनाउने उद्देश्य लिएर हिँडेको मान्छेलाई सानातिना गालीले फरक पार्दैन। मेरो कार्यक्रय, योजना बनाएर त्यसैअनुसार अघि बढेको छु, ओलीले भने, ‘संवृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली भावनाअनुसार गठबन्धन गरेँ, पत्रिव उद्देश्यका साथ पार्टी एकता गरेँ। प्रतिपक्षीसँग सम्मानजनक व्यवाहार गरेको थिएँ। सरकारको गन्तव्य प्रष्ट थियो। तर मलाई हटाइयो।’
ओलीले फेरि भने, ‘मविरुद्ध असंवैधानिक, अलोकतान्त्रिक, अपवित्र गठबन्धन बन्यो र हटाइयो।’ उनले आफ्नामा पालामा राज्य सञ्चालन गर्दा अपनाउनु पर्ने सजगता अपनाएको, निष्पक्षाता कामय गरेको, पक्षधरता नलिइए, स्वस्च्छ र पारदर्शी रुपमा नियुक्त गरेको जिकिर गरे। उनले भने, ‘मैंले नातावाद कृपावादको छाया समेत पर्न दिइन्।’
प्रधानमन्त्री हुन जन्मिएको होइन
अध्यक्ष ओलीले आफू प्रधानमन्त्री हुन नजन्मिएको तर काम गर्दागर्दै प्रधानमन्त्री हुन पुगेको बताए। आफू फेरि चुनाव जितेर प्रधानमन्त्री हुने उनको दाबी थियो। देउवालाई ग्रहदशाबाट प्रधानमन्त्री भएको भन्दै उनले कटाक्ष गरे।
‘म यो देश र देशका जनताको सेवाका लागि जन्मिएको हो। प्रधानमन्त्री हुन जन्मिएको होइन। काम गर्दै जाँदा ६४ वर्षको उमेरमा प्रधानमन्त्री भएको हुँ, ओलीले अगाडि भने,
‘फेरि पनि असाधरण जनमतका साथ मुल ढोकाबाट सत्तामा पुग्छु। मेरा काम हेरेर जनताले मत दिएका हुन्। नेताहरुको कुण्ठा, जलन, स्वार्थका समिश्रणबाट प्रधानमन्त्री भएको होइन। उछिट्टिएर, जाली मुद्दा जितेर प्रधानमन्त्री भएको होइन, परमादेशबाट पनि भएको थिइन्।’
ओलीले नेपाल पक्षका सांसदलाई मन्त्री दिन देउवालाई आग्रह गरे।
‘मेरै पार्टीका केही मानिसहरू पाउँला र खाउँला भनेर यहाँका पछाडि कुदेका छन्। तिनीहरूलाई मन्त्री बनाइदिनुहोस्, किन बिलम्ब गर्नुभएको? पछिपछि हिँडेका छन् प्लिज तिनीहरूलाई मन्त्री बनाइदिनु, ओलीले भने, ‘बिहानबेलुकी चाकरीमा हाजिर भएका छन्। मेरो दलमा घाटा भए सहुँला बुझुँला, मन्त्री बनाइदिनुस्।’ उनले मन्त्री खान स्वाँस्वाँ र फ्याँफ्याँ गरिरहेको भन्दै सांसदहरूप्रति कटाक्ष गरे।
साउन ३ गते एमालेका २२ जना सांसदले देउवालाई विश्वासको मत दिएका थिए।